News Archives | Page 40 of 56 | Popular
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့် အတူမြို့ ကြီးများ နယ်စပ်ဒေသမြို့များစားသောက်ဆိုင်များတွင်တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များ၏ ဟင်းလျာများကို ပေါ်ပေါ်တင်တင်ရောင်းချလာ
''တိုးရစ်တွေ လာရောက်တဲ့အခါ အမှတ်တရ ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပြုလုပ်ရောင်းချလာကြတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာလူမျိုး တွေဟာ အရင်ကတည်းက မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့ သူတစ်ပါးအသက် သတ်တာ တောသားဟင်းလျာစားသောက်တာ ဆေးထဲထည့်ဖော်စပ်တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်စနစ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့ အမျှ .…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်က စာအုပ်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့ တယ်။ ကျွန်တော်တို့စာဖတ်သူတွေ မက်မက်စက်စက် ခုံမင်ခဲ့တယ်။ လစဉ်မဂ္ဂဇင်းဆိုလည်း သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် ငှားယူခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကာ လက အင်တာနက် မထွန်းကားသေးဘူး။ VCD/DVD အခွေငှားဆိုင် တွေပဲ ရှိကြသေးတယ်။…
ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာ အောင်ပါ စေ သီချင်းနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သရုပ်ဖော် ကပြတင်ဆက်မှုမှာ မြန်မာဂန္ထဝင်သီချင်းကြီးနဲ့ မသင့်တော်တာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။...
အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းဦးတင်မောင် နှစ်၁ဝဝပြည့်မွေးနေ့မှာ ဖျော်ဖြေပွဲကြီးတစ်ခု လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့ ရွှေမန်းမိသားစု
သစွာမေတ္တာ ရွှေမန်းသဘင် မိ သားစုမှ အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်း ဦးတင်မောင်ရဲ့ ၉၉ နှစ်ပြည့် မွေး နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သဘင် လူမှုကူ ညီစောင့် ရှောက်ရေးကော် မတီ အ တွက် အလှူငွေကျပ် ၅သိန်း…
ရုပ်ရှင်ညီလာခံအပြီးမှာ ရုပ်ရှင်မြို့တော်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တော့မလား . . .
ရုပ်ရှင် ညီလာခံအပြီးမှာ ရုပ်ရှင်မြို့တော်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်တည် လာဖို့ လက်ရှိအမှုဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားဖို့ရှိမလားလို့ထပ်မေးတဲ့အခါမှာတော့ ''ရုပ်ရှင်မြို့တော်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စတွေထဲမှာ . . .
နိုင်ငံတကာ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များစွာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ AWPA International Photo Academy ရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုများရရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရှင်ဝဏ္ဏခွာနီးက ဇန်နဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့မှာ ဟောင်ကောင်မှာ ဆုသွားယူမယ်လို့ သိရပါတယ်....
Yangon Waterboom တွင် ဒီဇင်ဘာလအတွင့်း Yangon Waterboom Night Market ဈေးရောင်းပွဲတော်နှင့် ပြိုင်ပွဲများ၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်နှင့် New Year Countdown Pool Party စသည့် အစီအစဉ်များ ကျင်းပပြုလုပ်...
စာအုပ်အငှားဆိုင်က ဖတ်သူ နည်းတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမတင်တော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေဟာတောင့်မခံ နိုင်တော့ဘဲ ဘောလုံးဂျာနယ် ဦးစား ပေးရောင်းတဲ့ ဂျာနယ်အရောင်း ဆိုင်ဘဝ ပြောင်းသွားကုန်ကြတယ်။ သညူငညန ပေါ်အချိန်ကုန်တာ ရယ်၊ ငှားဖတ်စရာမဂ္ဂဇင်းတင်တဲ့ဆိုင် ရှားပါးပျောက်ကွယ်တာရယ်၊ နောက် မျိုးဆက်တွေ…
မင်းကင်းသစ်တောဌာနတွင်ထိန်းသိမ်းထားသော ကျောတွင် စက်တပ် ထားသည့် လင်းယုန်ကြီးကို ဆေးကုသပေးလျက်ရှိရာ ဘယ်ဘက်ချိုစောင်းတွင် ဒဏ်ရာရထားပြီး.....
အိမ်ထောင်စု ၄၄ စုတို့အား မြေကွက်ပါမစ်များ လွှဲအပ်ပေးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ယင်းအိမ်ထောင်စုများ နေထိုင်မည့်မြေကွက်ကို 'မရွှေထား ကွက်သစ်'ဟု ဆိုင်းဘုတ်တင်ခဲ့သည်။..............